Shirka Jaamacadda Carabta oo la soo gaba gabeeyay iyo war murtiyeed laga soo saaray – idalenews.com
Shirka Jaamacadda Carabta oo la soo gaba gabeeyay iyo war murtiyeed laga soo saaray
Shir madaxeedka 29aad ee Jaamacadda Carabta ayaa lagu soo gaba gabeeyay magaalada Damaam ee Boqortooyada Sacuudi Carabiya, iyadoo laga soo saaray war murtiyeed ka kooban dhowr qodob.
Madaxda Jaamacadda Carabta ayaa khudbadahooda diiradda ku saaray xaalada ka jirta Caalamka Carabta, qadiyada Falastiin iyo colaada Yemen iyo Libiya.
Sidoo kale Hoggaamiyeyaasha Carbeed ee ka hadlay shir-madaxeedkan ayaa iyaguna khudbadahooda ku xusay arrimaha Soomaaliya, sheegayna inay mar walba garab-taagan yihiin dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed.
War murtiyeedka laga soo saaray shirka ayaa qodob ka mid ah looga hadlay xaalada Soomaaliya, iyadoo lagu shaaciyay in Jaamacadda Carabta ay sii wadeyso taageerada ay siiyo dowladda Soomaaliya, sidii ay dib ugu soo celin laheyd xasiloonida, nabada iyo dagaalka ay kula jirto argagixisada iyo xoojinta hey’adaheeda.
Madaxweyne Farmaajo ayaa intii uu shirku socday waxa uu la wadaagay madaxda Carabta, guulaha la taaban karo ee Soomaaliya ay ku tallaabsatay muddadii la soo dhaafay iyo qorshayaasha ay muhiimka tahay in walaalaha Carbeed ay kala shaqeeyaan Dowladda Federaalka Soomaaliya, si ay qeyb uga noqdaan dib-u-kabashada dalka.
Dhinaca kale Madaxweynaha dowladda Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo ayaa ayaa saaka dalka dib ugu soo laabtay.
XFS oo War kasoo saartay Go’aanka ay ka gaareyso Xiriirka Imaaraadka
war xasaasi ah: Maxaa saka ka soo kordhay Xaruunta Xalane ee AMISOM iyo Amar Soomaalida looga Mamnuucayo oo soo baxay